ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်တွင် ဆန်ဝယ် ပြီးပြန်လာသည့် ဒေသခံရွာသားတဦးကို အစိုးရ စစ် တပ်၊ တပ်သားများက ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခြင် - ရှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင် (SHRF)
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်တွင် ဆန်ဝယ် ပြီးပြန်လာသည့် ဒေသခံရွာသားတဦးကို အစိုးရ စစ် တပ်၊ တပ်သားများက ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခြင်
၂၅ . ၇ . ၂၀၁၉ ခုနှစ်
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်တွင် ဆန်ဝယ် ပြီးပြန်လာသည့် ဒေသခံရွာသားတဦးကို အစိုးရ စစ် တပ်၊ တပ်သားများက ရိုက်နှက်စစ်ဆေးခြင်း
၆.၇.၂၀၁၉တွင် အစိုးရစစ်တပ် ခမရ အမှတ်(၅၇၉)မှတပ်သားများက ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းဆတ်ခရိုင် မိုင်း ပျဉ်းမြို့နယ် မိုင်းလျှန်းကျေးရွာတွင် ဆန်ဝယ်ပြီးပြန်လာသည့် လားဟူလူမျိုး ရွာသားတဦးကို ရိုက် နှက် စစ်ဆေးကြောင်းသိရသည်။
၆.၇.၂၀၁၉ ညနေ ၆းဝဝ အချိန်တွင် အသက်(၃၂)နှစ် ဇာပေါအမည်ရှိ လားဟူရွာသားတဦးသည် ရွာတွင်း ကုန်စုံဆိုင်မှဆန်ဝယ်ပြီး အိမ်သို့ပြန်အလာတွင် ခမရ အမှတ်(၅၇၉)မှ အင်အား(၂၀)ခန့်ရှိ စစ်သားများ နှင့်ဆုံမိခါ စစ်သားများက ၄င်းအားခေါ်ယူပြီး”ရှမ်းစစ်သားတွေအတွက် မင်းဆန်လာဝယ် ပေးနေတာမ ဟုတ်လား” ဟု စွပ်စွဲပြောဆိုပြီး လက်သီးဖြင့် (၇)ချက်တိတိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထိုးနှက်ခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
လားဟူလူမျိုး ဇာပေါက”မိမိသည် ရှမ်းစစ်သားတွေအတွက် ဆန်လာဝယ် ပေးတာမဟုတ်ကြောင်း ဆေး ဖက်ဝင်အပင်သွားရှာဖို့ တောတွင်းသို့ ညအိပ်သွားရန် ရိက္ခာလာဝယ်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ရှင်း ပြခဲ့ရသည်”ဟု သိရသည်။ ထိုနောက် ၄င်းတပ်သားများက ဇာပေါ့အား (၁) နာရီခန့် စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး ပြန်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
(ခမရ)ခြေမြန်တပ်ရင်း အမှတ်(၅၇၉)သည် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံအတွင်း အခြေစိုက် ထား သော တြိဂံဒေသ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၏ စစ်ဆင်ရေး ကွပ်ကဲဌာနချုပ် အမှတ် (၁၄) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မိုင်းလျှန်းကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ(၃၀)ရှိပြီး ရှမ်းလူမျိုးများနှင့်လားဟူလူမျိုးများတို့ စုပေါင်းနေထိုင် ကြ သည်။ ၄င်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့်”ဇာပေါ”သည် ဦးဇာဟေ့+ဒေါ်နိုင်းတို့၏သားဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်တွင်အစိုးရစစ်တပ််မှတပ်သားများက ဒေသခံပြည်သူတို့စိုက် ပျိုး ထား သော သီးနှံများကို ပိုင်ရှင်တို့အား အသိမပေးဘဲ ယူဆောင်ခြင်း
၁၃ – ၁၅ . ၀၇ . ၂၀၁၉ မိုင်းတုံးတွင် အခြေစိုက်ထားသော အစိုးရ စစ်တပ် ခမရ(၅၄၄) တပ်သည်
ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မိုင်းပူးအွန်အုပ်စု နားကွန်ဆိုင်းရွာအနီးရှိ ဒေသခံရွာသူရွာသား များ စိုက်ပျိုးထားသော သီးနှံများနှင့် အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကို ဒေသခံပိုင်ရှင်များကို အသိမပေး၊ ခွင့်မ တောင်း ဘဲ ယူဆောင်သွားခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
၁၃.၀၇.၂၀၁၉ နံနက်၈းဝဝအချိန်တွင် အစိုးရစစ်တပ််မှ အင်အား(၃၀)ခန့်ရှိ တပ်သားများသည်
ဒေသခံ ရွာသူရွာသားများ စိုက်ပျိုးထားသော ဟင်းသီးဟင်းရွက် သီးနှံများကို ပိုင်ရှင်များအား အသိမပေး၊ ခွင့်မတောင်းဘဲ ။ ခြင်းများ ပီနံအိတ်များဖြင့် အပြည့် စိတ်ကြိုက်ခူးယူသယ်ဆောင်သွားခဲ့ကြကြောင်း သိရ သည်။ ၄င်းတို့ယူဆောင်သွားသော
ဟင်းသီးဟင်းရွက် သီးနှံတို့၏ ကာလတန်ဘိုးမှာ (၁၅၀၀၀)ကျပ် ခန့်ရှိကြောင်း ခြံပိုင်ရှင်ဖြစ်သည့် လုံးဖိုး မား ပါ့နန်းဝိုးဆိုင်တို့ထံမှ သိရသည်။
၁၄.၀၇.၂၀၁၉ ညနေ ၃းဝဝအချိန်တွင် ခမရ(၅၄၄)တပ်မှ တပ်သားများသည် နားကွန်ဆိုင်းရွာနေ လုံး လိုင်းဆိုင်စင်နှင့် ပါ့လိုင်းဆိုင်လူတို့အိမ်ရှိ ဘဲသုံးကောင်ကိုလည်း ခိုးယူသွားခဲ့သေးကြောင်း၊ ၄င်း ဘဲသုံး ကောင်၏ ကာလတန်ဘိုးမှာ ၃ဝဝဝဝကျပ် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
၁၅.၀၇.၂၀၁၉ နံနက် (၇)နာရီတွင် ခမရ(၅၄၄)မှ တပ်သားများသည် နားကွန်ဆိုင်းရွာနေ လုံးဖိုးမား ပါ့နန်း ဝိုးစိန်တို့ နေအိမ်ရှိ ဘဲသုံးကောင်ကို ထပ်မံခိုးယူသွားခဲ့ကြောင်း၊ ၄င်းဘဲသုံးကောင်၏ ကာလတန်ဘိုး မှာ (၂၄၀၀၀) ကျပ် ရှိကြောင်း သိရသည်။
၎င်းစစ်တပ်သည် ထိုရွာအပြင်တွင် တပ်စခန်းချပြီး ရွာအတွင်းသို့ စားသောက်ဖွယ်ရာများကို လာရောက် ခိုးယူနေခဲ့ကြသည်။
စိုင်းဟော်ရှဲန် +66: 63-389-5088 (ရှမ်း၊ အင်္ဂလိပ်)